एन्टोनी मेसन • अगस्ट 19, 2013 मा 9:36 छु • जवाफ
मलाई लगभग लाग्दछ कि ट्रिप ली मेरो पादरी हुनुहुन्छ
एफ्रेम एन्डरसन • अगस्ट 19, 2013 मा 9:36 छु • जवाफ
RubiTootie • अगस्ट 19, 2013 मा 9:37 छु • जवाफ
मैले राखेको छु “शब्द को महत्व” मेरो मन र मन मा. यो मेरो आत्मामा भारी भएको छ. वाक्पटु हुनु भनेको एक ईमान्दार निर्णय हो जसको खुराक मापन गर्न को लागी तपाइँ प्रेम सम्मिलित गर्नुहुन्छ, घृणा, दया, वा अरुको मुटुमा चोट, आत्मा र जीवन. तर मेरो छिमेकी को रूप मा उल्लेख छ जब उनी आफ्नो मालिक को बारे मा बोल्दै थिए, “के उसले देख्दैन कि उसले ती चीजहरु गर्छ जुन उसले हामीलाई भन्नको लागी गर्दैन??? किन उनी आफैंमा यति अन्धा छन्?? के उसले आफैं बोलेको सुन्दैन? के उसले उसको मुख बाट निस्कने शब्द सुन्दैन? म उसलाई बुझ्दिन।” के तपाइँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो आफैंलाई सन्देशमा देख्नुहुन्न?? के तपाइँ आफैं को विशेष यथार्थहरु संग व्यवहार नगरी जीवन बाँचेको छ? त्यसो भए, तपाइँ तपाइँको सबैभन्दा ठूलो बाधा र आशीर्वाद अवरोधक बन्नुभयो. पागलपन को परिभाषा बारम्बार एउटै कुरा गर्न र एक फरक नतिजा को आशा गर्न को लागी हो. तपाइँ पागल हुनु भन्दा पहिले तपाइँ कहिले सम्म जानुहुन्छ?? कहिले सम्म तपाइँ तपाइँको व्यक्तिगत पाप को इन्कार को लागी भगवान को वचन मा नजिक हिड्न बाट रोक्न अनुमति दिनुहुन्छ? धेरैजसो जीवन सुन्ने मात्र सुन्न को लागी सुविधाजनक छ कि उनीहरुलाई सुन्न को लागी जारी रहनेछ, तर साँच्चै कहिल्यै सुन्नुहुन्न, त्यसैले, कहिल्यै लागू नगर्नुहोस् जुन साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ. यसको कारण यो हो कि जब तपाइँ जान्नुहुन्छ कि केहि गलत छ तपाइँ परिवर्तन लागू गर्नु पर्छ. र परिवर्तन…एक डरलाग्दो र अक्सर पीडादायी प्रक्रिया हो, तर एक प्रक्रिया जुन अपरिहार्य छ. भगवान तपाइँ अनुग्रह संग वा बिना यो परिवर्तन हुनेछ. यो एनेस्थेसिया वा यसको बिना शल्यक्रिया जस्तै हो. भगवानले तपाइँलाई छनौट गर्ने क्षमता दिनुभयो. तेसैले भगवान लाई गर्व गर्न को लागी एक फैशन मा तपाइँको जीवन बिताउन को लागी छनौट गर्नुहोस् वा अस्वीकार मा अर्को तरीका बाट हेर्न को लागी छनौट गर्नुहोस्. परिवर्तन अपरिहार्य छ. मृत्यु पनि छ. एक वा अर्को तरीका…हामी को हौं भन्ने साँचो सत्य को जवाफ दिनु पर्छ, थिए, र म हुँ जो म हुँ.
प्रश्न म सधैं आफैलाई सोध्छु, “के मैले भगवानलाई गर्व गरें वा मेरो निर्णयहरु भगवानलाई रुनु पर्ने अर्को कारण थियो?”
शकिना स्मिथ • अगस्ट 19, 2013 मा 9:37 छु • जवाफ
मृत्यु र जीवन जिब्रो को शक्ति मा छ,
र यसलाई माया गर्नेहरु यसको फल खान्छन्. नीतिहरु 18:21 यसलाई माया गर्नुहोस् यो यो माया गर्नुहोस्. सत्य
अलेशिया रोबिन्सन • अगस्ट 19, 2013 मा 9:37 छु • जवाफ
म स्वीकार गर्नै पर्छ कि म सुरु मा condenmed महसुस गरे. भगवान अब हामी संग के गलत छ हेर्न को लागी हाम्रो जीवन को जांच गरीरहेको छैन. उहाँ ख्रीष्टको माध्यमबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ र उहाँमा हामीलाई सही टिकट लगाउनुहुन्छ त्यसैले पहिलो दस मिनेट वा तेसैले म यसलाई बन्द गर्ने थिएँ किनकि मलाई लाग्यो कि तपाइँ हामी मा धेरै जोड दिइरहनु भएको थियो र उहाँलाई होइन।. तर बीच तिर तिमिले यो उसलाई र क्रस मा विनिमय को चारैतिर घुमायो र अन्त मा मँ edified महसुस गरे.
lbsickning • अगस्ट 19, 2013 मा 9:38 छु • जवाफ
धेरै माया र सम्मान